phalaicha khabar – Phalaicha Khabar
Author: phalaicha khabar
Posted on २०७८ आश्विन ३, आईतवार ११:३२ by phalaicha khabar
Posted in कला/साहित्य, रगंमञ्चTagged Comedy champion, बिक्की अग्रवाल, भरतमणि पौडेल, सन्तोष थापाLeaveaComment on विजेता बने भरतमणि पौडेल
Posted on २०७८ आश्विन २, शनिबार ०६:२० २०७८ आश्विन २, शनिबार ०६:२२ by phalaicha khabar
दमक | कोरोना महामारीअघि हरेक वर्षको दशैंमा फिल्म रिलिज गर्न निर्माताबीच हानाथाप हुन्थ्यो । किनकि, दशैं विदा फिल्म रिलिजका लागि सबैभन्दा राम्रो समय हो । तर, गत वर्ष दशैंमा कोरोनाका कारण सिनेमा हल सुनसान भए । यस वर्षको दशैंमा भने नयाँ फिल्म रिलिज हुने भएको छ । फूलपातीपछिको दशैं विदा हत्याउन शुक्रवार फिल्म ‘धन्दागिरी’ ले रिलिज डेट घोषणा गरेको छ ।
असोज २५ गते (फूलपातीको अघिल्लो दिन) लाई प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै निर्माण टिमले शुक्रवार ट्रेलर पनि सार्वजनिक गर्‍यो । ट्रेलरमा एक्सनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । अभिनेता सविन श्रेष्ठ र अभिनेत्री छुल्ठिम गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको यस फिल्ममा दिनेश खड्का, दिनेश डिसी, सुशील पोखरेल, स्व. दीपक क्षेत्री, स्व. बिएस राणा लगायतको पनि अभिनय देख्न पाइन्छ ।
नरेन्द्र भट्टराई (एन बी अन्जान)को कथा र निर्देशन रहेको फिल्ममा दिनेश खड्का एसोसियट निर्माता र कुमार प्रसाद ओझा कार्यकारी निर्माताको रुपमा छन् । कवि भक्त क्षेत्री र फुर्वा दोर्जे तामाङ फिल्मका निर्माता हुन् । आरआर फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मलाई रोहित कट्टेल र रत्न श्रेष्ठले वितरण गर्नेछन् । फिल्मले दर्शकलाई भरपूर मनोरञ्जन र सन्तुष्टि दिने निर्देशक भट्टराईको दाबी छ ।
Posted in कला/साहित्य, रगंमञ्चTagged Dhandagiri, धन्दागिरीLeaveaComment on फूलपातीको अघिल्लो दिन धन्दागिरी आउँदै
Posted on २०७८ श्रावण ४, सोमबार १२:४७ by phalaicha khabar
दमक | विभिन्न चाडपर्वहरूको महत्व र गरिमालाई ती चाडपर्वहरू सम्बन्धी बनेका गीतसंगीतहरूले झन माथि उठाउने र आकर्षित गर्ने गर्छन् । नेपालमा पनि विशेष गरेर तीज, दशैँ, तिहार र होली सम्बन्धी प्रसस्तै गीतसंगीत बन्ने गरेका छन् । २ वर्षदेखि भने संसारभर आएको कोरोना महामारीका कारण अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो यस्ता गीतसंगीतहरूमा चापाचाप काम भइरहेको छैन । तथापि यस्ता चाडपर्वहरूको महतालाई उजागर गर्न केही कलाकर्मीहरू भने यस्तो चुनौतिपूर्ण समयमा पनि मिहेनत गरिहेका छन् ।
यसैबिच नेपाली नारीहरूको महान् चाड मानिने तीज नजिकिँदै गर्दा तीज सम्बन्धी गीतहरू सार्वजनिक हुने क्रम सुरु भइसकेको छ । यही मेसोमा संगीता शिवाकोटी र तिलक बस्नेतको स्वरमा रहेको गीत ‘मै घुमें फनफनी’ सार्वजनिक भएको छ ।
तिलक बस्नेतकै शब्द र संगीत रहेको गीतमा सुदीप सागरको संगीत संयोजन रहेको छ । ‘वान डीबी’ स्टुडियोमा विमल छिनालले रेकर्ड गरेको गीतलाई एच.बी.एन. किस्मतले मिक्सिङ–माष्टरिङ गरेका हुन् ।
भिडियोमा आकाश श्रेष्ठ र वर्षा शिवाकोटीले नृत्य र अभिनय गरेका छन् । छमछमी नाच्न मिल्ने उक्त गीतको म्युजिक भिडियो ‘एट के एभरेष्ट मोसन पिक्चर’ युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको छ ।
‘मै घुमे फनफनी’ गीतको म्युजिक भिडियो संगीता शिवाकोटीको पहिलो अफिसियल म्युजिक भिडियो हो ।
Posted in कला/साहित्य, रगंमञ्च, रोचकTagged Fanfani - Tilak Basnet, मै घुमे फनफनी, संगीता शिवाकोटीLeaveaComment on संगीता र तिलकको ‘मै घुमे फनफनी’ मा वर्षा र आकाशको छमछमी
Posted on २०७८ असार ३१, बिहीबार २०:२२ by phalaicha khabar
Posted in कला/साहित्य, रगंमञ्च, रोचक, लेखLeaveaComment on ‘चक्रेनी बोजू’ को भूत
Posted on २०७८ असार २२, मंगलवार १४:४९ by phalaicha khabar
दमक | गायक सुरेश धिमालको दोस्रो गीत रिलिज भएको छ । म‌ंगलबार उनको ‘गाजलु आँखाको’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो युट्यबमार्फत सार्वजनिक भएको छ ।
यसअघि उनको ‘रोजेर तिमिलाई’ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ । ‘गाजलु आँखाको” गीतको म्यूजिक भिडियोलाई ‘ट्युन एन्ड टोन इन्टरटेन्मेन्ट’ युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।
पूर्वमा आफ्नो परिचय बनाइसकेका गायक धिमालको आवाज रहेको यो गीतको शब्द रचना उपेन्द्र अधिकारीको रहेको छ । शब्दहरूमा धुन भर्ने काम भने लेखराज ढकालले गरेका छन् । संगीत संयोजन अर्थात एरेन्ज भने अशोक थापाको रहेको छ । उक्त गीतलाई काव्या रेकर्डिङ स्टुडियो, दमकमा रेकर्ड गरिएको थियो ।
म्युजिक भिडियोमा भुवन खड्का र सीमा धिमालको अभिनय रहेको छ । मोरङ र झापका विभिन्न स्थलहरुमा छायाङ्कन गरिएको उक्त भिडियोको निर्देशन वियाल राईले गरेका छन् । मुह मगरले छायाङ्कन गरेको उक्त भिडियोका लागि सुमन मग्रातीले श्रृङ्कारको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
Posted in कला/साहित्य, रगंमञ्चTagged गाजलु आँखाको, सुरेश धिमालLeaveaComment on गायक सुरेश धिमालको ‘गाजलु आँखाको’ सार्वजनिक
Posted on २०७८ असार २१, सोमबार २१:११ by phalaicha khabar
तिमीले असार पन्ध्रका
अनेकन् परिकार सजाएर
अरुले ठिक्क पारेकाे हिलाेमा
सेल्फी खिचेर पाेेष्ट गरेपछि
मैले पनि सम्झिएकी हुँ
साँच्चै असार त
पानी पिउन नपाएकाे खेतकाे तिर्खामा हुन्छ
या त पानी नै पानी भएर
समाहा भन्दा माथि भरिएर
खेतकाे आली नाघेर झर्ने
किसानकाे आँसुमा हुन्छ
गाेरु नारेर केहीछिन हिल्याएपछि
हिलाेमा फाली हराएर
खाेज्नुकाे दु:खमा हुन्छ
तिम्राे सेल्फीजस्ताे कहाँ छ र
असार पन्ध्रकाे ब्यथा?
धान राेप्ने याे बेलामा
हेर त यी खेतहरु पटपटी फुटेका छन्
जसरी फुटेकाछन् मेरा बाका कुर्कुच्चाहरु।
आफ्नै उर्वरताकाे रगत पिएर
आफू बाँझाे रहनुकाे पिडा
आकाससँगै राेएकाे छ
याे खेतकाे माटाे ।
वर्षाैं भयाे हलि बालुवा निचाेरेर
यता पहिराेले उसकै खेत
साेध उनकै गाउँलाई साेध
कस्ताे आएकाे छ तिम्राे
खेतमा असार पन्ध्रकाे बिऊ।
तिमीले खिचेकाे सेल्फीमा
कहाँ छ र मानाेकाे खेती?
कहाँ छ र मुरीकाे सपना?
असार भन्नु सपना पनि हाे
जहाँ चुलाेकाे भविश्य बाँचेकाे हाेस्
परिवारकाे खुसी हाँसेकाे हाेस्।
अचेल हाँस्दैनन् सपना
हिलाे आली बनेर
दाँदे फ्याउरी बनेर
राेपाहार बाउसेका पाखुराहरुमा
ब्याडे गह्राका खुसीहरुमा।
खेतकाे गह्राकाे नजीकैकाे ढुङ्गामा
बसाेस् काेही त
धमिलाे पानीले हात पखालेर
गुन्द्रुक र भुटेका मकै चपाओस् काेही त
र कल्पियाेस् मंसिरमा झुलेका
लहलह धानका बाला।
तिम्राे सेल्फी देखेपछि लाग्दैछ
बिऊ बाेकेर लैजादैगर्दा
बरु सुरक्षित लडाेस् खेतधनी
बरु फाली नै हराओस्
हल्लुड नै चुडियाेस्
कि त जुवा, हरिस,अनउ नै बाँचियाेस
तर कदापि नहराउन्
याे देशका हली, बाउसे र राेपाहार
बिदेशी रेमिट्यान्स बनेर।
Posted in कला/साहित्य, लेखLeaveaComment on असार पन्ध्र
Posted on २०७८ बैशाख ३०, बिहीबार ०९:३५ by phalaicha khabar
रातभर कोल्टे फेरिरहनु हुन्थ्यो
चुर खाइरहनु हुन्थ्यो
एक्लै मनसगँ बात मार्दै
पट्यार लाग्दा रातहरुलार्इ
कहिले ओख्लीभरि कुट्नु हुन्थ्यो
कहिले जातोभरि पिस्नु हुन्थ्यो
यसरी आमा प्राय अनिन्दा रातहरु
सुस्केरा हाल्दै काट्नु हुन्थ्यो
र झिस्मिसेमै उठेर आँखामा अर्धकल्चो
सपना मिच्दै मेलोमा लाग्नु हुन्थ्यो
आमाको आदतदेखि दिक्क म, कराउँथे
– भुत जस्तो रातभर जाग्नुहुन्छ
– कति चुर खानु भएको होला
– खानामा ध्यान दिनु थि र सिजवामा होइन
– कि छाडेर गएको बुवाको याद आयो
आमा आफ्ना चिसा आँखाहरु पुछ्दै फुस फुसाउथिन्
“कान्छा तँलाई पछिईईईई था, हुन्छ
अचेल घरब्यबहारको जुवा मेरो काँधमा परेको छ
जोत्नु छ मैले सिङ्गो धर्ती र
रोप्नु छ जीवन गरा–गरा
आमा अचेल मेरा अनिन्दा आँखाहरु देखेर
“कान्छा पीर नलिई
मान्छेको दुख्ख त मरेपछि मात्रै सकिन्छ”
उसो भए म बाच्न चाहान्छु।।
Posted in कला/साहित्य, रगंमञ्च, रोचक, लेखLeaveaComment on आमाप्रति (कविता)